मानब सरीरको कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्ने ? - Nepal News - Latest News from Nepal
मानब सरीरको कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्ने ?
डा अनन्त श्रेष्ठ (कलेजो रोग विशेषज्ञ)
अल्पकालिन हेपटाइटिस ९जण्डिस० मा खान मन नलाग्ने, वाकवाक लाग्ने हुन्छ। दीर्घकालिनमा यस्तो लक्षण देखिदैंन। यसले त धमीराले काठ खाएझैं विस्तारै हानी गर्छ। खोक्रो बनाइसकेपनि दसौं वर्षसम्म थाहा नहुन सक्छ। कलेजो कडा हुँदै जान्छ भने कालान्तरमा क्यान्सर वा कलेजो फेल हुन सक्छ।
लापरबाही गरे के हुन्छरु
कसरी थाहा पाउनेरु
कलेजो कसरी जोगाउनेरु
जुम्लामा स्याउ टिप्ने सीजन भयपछी मानिसहरु लाई चटारो